जोशीको विद्रोह, युवाहरुको शालिनता :: Tarun Khabar: Digital Online Paper from Nepal
जोशीको विद्रोह, युवाहरुको शालिनता
२०४८ सालदेखि भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट सानदार मत ल्याएर लगातार चुनाव जित्दै आएका नारायणमान बिजुक्छे यसपटक पछि हटेका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष बिजुक्छे ७७ वर्षका भए । निर्वाचन हुन गइरहेका मुलुकका १६५ क्षेत्रमध्ये भक्तपुर १ कसले जित्छ ? भनेर सजिलै पूर्वानुमान लगाउन सकिने क्षेत्र हो । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भक्तपुर नगरपालिकामा नेमकिपाका उम्मेदवारले २६ हजार मत ल्याएर मेयर पदमा चुनाव जितेका थिए भने उनका निकटतम प्रतिस्पर्धीले ६ हजार मत ल्याएका थिए । पुराना कम्युनिस्ट नेता बिजुक्छेको सम्मानका लागि आफ्नोतर्फबाट कुनै पनि उम्मेदवार नउठाउने निर्णय एमाले–माओवादी गठबन्धनले गरेको थियो । अत्यधिक मत ल्याएर चुनाव जित्ने अवस्था सतप्रतिशत हुँदाहुँदै पनि बिजुक्छे आफू पछि हट्दै युवा नेता प्रेम सुवाललाई उम्मेदवार बनाए । यतिबेला बिजुक्छे मुलुकको राजनीतिमा सर्वाधिक चर्चामा छन् ।
७७ वर्षका बिजुक्छेले चुनावबाट पछि हटेर नेतृत्व हस्तान्तरणको अभ्यास गरिरहँदा नेपाली कांग्रेसभित्र भने उनकै उमेर समूहका नेताहरू प्रतिश्पर्धामा छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ– ‘तनहुँ १ ।’ विगतको क्षेत्र नम्बर १ र २ को आधा मिलाएर यतिबेला क्षेत्र नम्बर १ बनेको छ । तनहुँ १ मा ७५ वर्षीय कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल छैटौंपटक उम्मेदवार बनेका छन् । यसअघिका पाँचवटा निर्वाचनमा उनले यसै क्षेत्रबाट चुनाव जितेका थिए । पौडेलको उम्मेदवारीविरुद्ध असन्तुष्टि जनाउँदै ७१ वर्षीय जोशीले बागी उम्मेदवारी दर्र्ता गराएका छन् । जोशीले २०४८, २०५१ र २०५६ मा यसै क्षेत्रबाट चुनाव जितेका थिए भने २०६४ सालको निर्वाचनमा उनी तेस्रो पोजिसन ल्याएर पराजित बनेका थिए । यतिवेला जोशीको उम्मेदवारी खारेजी प्रकरण सर्वाधिक चर्चामा छ । पौडेल आफैले दिएको उजुरीमा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी रद्धको घटनालाई जोशीले सामान्य रुपमा लिएका छैनन् । उनका समर्थकहरुको मत स्वतन्त्र व्यक्तिलाई होईन अब एमाले उम्मेदवारलाई गयो भने अवस्था के हुन सक्छ भन्नेतर्फ पौडेलले विश्लेषण गरेको नदेखिनु दुखद् अवस्था हो ।
२०७० सालको निर्वाचनमा भने नेपाली कांग्रेसले वृद्ध नेता जोशीलाई पछि हटाएर युवा नेता शंकर भण्डारीलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । मुलुकको अग्रगामी परिवर्तनका लागि ठूलो योगदान पु¥याएका युवा नेताहरूको उर्वरभूमि हो तनहुँ जिल्ला । २०४८ सालमा टिकट पाउँदासम्म पौडेल र जोशीको राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन खालको योगदान थियो, यतिबेला त्यति नै योगदान पु¥याएका युवा नेताहरूको संख्या तनहुँमा ३७ छ । तर चुनावी मैदानमा भने लगातार २०४८ सालदेखि एउटै अनुहार छन् । एउटा बृद्धविरुद्ध अर्को बृद्धले बागी उम्मेदवारी दिनुबाहेक तनहुँ कांग्रेसमा खासै परिवर्तन देखिएको छैन ।
राजनीतिबाट विश्राम लिने बेलाका पौडेललाई उम्मेदवार बनाउनु पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि बाध्यता नै थियो । गत महाधिवेशनमा आफ्ना निकटतम प्रतिस्पर्धी पौडेललाई टिकट नदिँदा सभापति देउवाविरुद्ध गलत सन्देश जाने अवस्था थियो । यदि पौडेललाई टिकट नदिइएको भए पनि त्यसको विकल्प जोशी हुन सक्ने अवस्था थिएन । पहिलो कुरा त, यी दुई बीच जम्मा तीन वर्षको उमेर अन्तर हो । स्वास्थ्यका दृष्टिले पौडेल हट्टाकट्टा छन् भने जोशीको अवस्था निकै नाजुक छ । २०७० सालको निर्वाचनमा पनि जोशीको उमेर तथा स्वास्थ्यको अवस्थालाई ख्याल गर्दै पार्टीले तनहुँ १ मा शंकर भण्डारीलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । भण्डारीले करिब पाँच हजार मतअन्तरमा चुनाव जितेका थिए । यतिबेला भण्डारीलाई १ मै निरन्तरता दिएर पौडेल क्षेत्र नम्बर २ मा उम्मेदवार बनेको भए जोशीले विद्रोह गर्ने सम्भावना कम थियो । गोरखासँग घर जोडिएका भण्डारीलाई पाल्पासँग जोडिएको क्षेत्र नम्बर २ मा उम्मेदवार बनाउँदा कांग्रेसलाई सजिलो छैन । पाल्पा, स्याङ्जा र कास्कीसँग जोडिएका पालिकाहरूमा कांग्रेसको तुलनामा वामपन्थी भोट बलियो छ ।
‘सौताको रिसले पोइको काखमा पिसाब फेर्नु हुन्न’ भन्ने नेपाली उखान छ । नेपाली कांग्रेस रह्यो भने अहिलेका युवा नेताहरूको भविष्य स्वतः सुरक्षित छ । पार्टी नै रहेन भने भविष्य स्वतः अन्धकार छ । पार्टी जोगियो भने अवसरले पछ्याउँदै आउने निश्चित छ । यसको उदाहरण हुन्, वीरगन्जकी उपमेयर शान्ति कार्की । २००७ सालको जनक्रान्तिदेखि नै नेपाली कांग्रेसमा निरन्तर योगदान पु-याउँदै आएकी कार्कीलाई ८७ वर्षको उमेरमा पार्टीले उपमेयर पदमा टिकट दियो ।
प्रतिस्पर्धी एमालेले ७० नाघेकालाई पार्टी नेतृत्वबाट विश्राम दिने नीति ल्याइरहँदा नेपाली कांग्रेसले प्राथमिकताका साथ ७० नाघेकालाई उम्मेदवार बनाएको छ । भक्तपुरमा बिजुक्छेले विश्राम लिइरहँदा नेपाली कांग्रेसले दमननाथ ढुंगानाको सम्मान गर्दै भक्तपुर २ मा लगेर उम्मेदवार बनाएको छ । नुवाकोट–२ मा अर्जुननरसिंह केसी, कास्की ३ मा शुक्रराज शर्मा, स्याङ्जा २ मा गोपालमान श्रेष्ठ, काठमाडौं–९ मा ध्यानगोविन्द रञ्जितलगायत बूढापाका उम्मेदवारहरूको संख्या उल्लेख्य छ । पोखराका बयोवृद्ध समाजसेवी सूर्यबहादुर केसीलाई अघिल्लो दिन पार्टीमा प्रवेश गराएर भोलिपल्ट समानुपातिकको सूचीमा राखिएको छ । उनीभन्दा ११ वर्ष कान्छा तारानाथ रानाभाट यसपटक पनि अटाएनन् । पार्टी महामन्त्री र सभामुख भइसकेका प्रखर नेता रानाभाटभन्दा अघिल्लो दिन कांग्रेस प्रवेश गरेका नवकुवेर केसी के कारणले रोजाइमा परे ? भन्ने प्रश्न आश्चर्यजनक छ ।
गुरु घिमिरे, बद्री पाण्डे, किरण पौडेल, प्रगतिमान रञ्जित, कल्याण गुरुङ, डा. टकराज गुरुङलगायतका करिब सयजना युवा नेताहरूको नाम न प्रदेशसभाको उम्मेदवारको सूचीमा देखियो, न प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारको सूचीमा । समानुपातिक सूचीमा पनि यी युवा नेताहरू परेनन् । यी युवा नेताहरूको धैर्यताको बाँध टुट्न दिनुहुन्न । पुष्प पराजुलीलगायतका केही युवा नेताहरूले धैर्यताको बाँध टुटाइरहँदा गुरु घिमिरेले आफ्नो फेसबुक वालमा मार्मिक अभिव्यक्ति लेखेका छन् । उनले भनेका छन्– ‘नेपाली कांग्रेसको संसदीय समितिलै टिकट वितरणमा गरेको विभेद र अन्याय परम्परागत रूपमा राज्यले गरेको विभेद र अन्यायभन्दा जघन्य छ । यस्तो निर्णय मान्न हामी अभिशप्त छैनौ । जुन राजनीतिक व्यवस्था ल्याउन हामीले जीवनलाई जोखिममा राख्यौं, त्यही व्यवस्थाले हामीमाथि अन्याय गर्दैछ भन्ने आभास हँुदैछ । नेपाली कांग्रेसलाई जिताउन दिलोज्यान लगाउँछौं, तर अन्याय कदापि सहन्नौ ।’
‘सौताको रिसले पोइको काखमा पिसाब फेर्नु हुन्न’ भन्ने नेपाली उखान छ । नेपाली कांग्रेस रह्यो भने अहिलेका युवा नेताहरूको भविष्य स्वतः सुरक्षित छ । पार्टी नै रहेन भने भविष्य स्वतः अन्धकार छ । पार्टी जोगियो भने अवसरले पछ्याउँदै आउने निश्चित छ । यसको उदाहरण हुन्, वीरगन्जकी उपमेयर शान्ति कार्की । २००७ सालको जनक्रान्तिदेखि नै नेपाली कांग्रेसमा निरन्तर योगदान पु¥याउँदै आएकी कार्कीलाई ८७ वर्षको उमेरमा पार्टीले उपमेयर पदमा टिकट दियो । उनको योगदानको मूल्यांकन गर्दै जनताले पुरस्कृत गरिदिए । निरन्तर कर्ममा अविचलित भएर लाग्यो भने अवसरले खोज्दै आउँदो रहेछ । नेपाली कांग्रेसका युुवा नेताहरूलाई धैर्यधारण गर्ने प्रेरणा मिलोस् ।
एमाले माओवादी गठबन्धन सधैं निरन्तर रहने र अब ५० वर्ष यो मुलुकमा कम्युनिस्टले शासन गर्ने उद्घोष एमालेका सचिव योेगेश भट्टराईले गरेपछि त्यसको काउन्टरमा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भने– ‘कम्युनिस्ट शासन आयो भने मानवअधिकारदेखि प्रजातन्त्र सबै समाप्त हुन्छ, त्यतिबेला जनताले साह्रै दुःख पाउँछन् । रुनसमेत पाउँदैनन् ।’ देउवाको यो जवाफको प्रतिउत्तर कम्युनिस्ट कित्ताबाट आउनुपर्नेमा पोखरा कांग्रेसका युवा नेता विश्व सिग्देलले फेसबुकमा लेखे– ‘तपाईहरू सही भएको भए कम्युनिस्टहरू अझै ५० वर्ष सत्तामा आउने थिएनन् ।’
Tarun Khabar0response सोमबार,२० कार्तिक २०७४ 347 Views